Komishanka Oo Tafaasiil Kaga bixiyay Doorashadii iyo Cabashooyinka Ka soo baxayba | Somaliland.Org
Komishanka Oo Tafaasiil Kaga bixiyay Doorashadii iyo Cabashooyinka Ka soo baxayba
December 19, 2012	“Haddii ay jiraan cabashooyin xaqiiq ku fadhiya waxa ka garnaqa Garsoorka Dalka”
Komishanka Oo Qodob-qodob uga jawaabay eedihii loo jeediyay
Hargeysa (Somaliland.Org)- Komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa maanta ka war-bixiyay hanaankii ay u qabsoontay doorashadii Goleyaasha deegaanka ee dalka ka dhacday daba-yaaqadii bishii hore, waxaanay gaashaanka ku dhufteen eedo kala duwan oo loo jeediyay.
Komishanku waxay sidaasi ku sheegeen war-murtiyeed ay maanta ka soo saareen magaaladda Hargeysa oo u dhignaa sidan:-
“Waxa aanu halkan mahadnaq balaadhan uga soo jeedinaynaa dhamaan bulsho weynta Somaliand ee sida nabadgelyada ah ee quruxda badan uga qayb qaadatay doorashooyinkii inooga qabsoomay dalka 28 Nov 2012. Waana baal kale oo ka mid ah taariikhda milgaha iyo wanaaga leh ee dadkani leeyihiin.
Waxa sidaa si la mid ah Guddida Doorashooyinka Qaranku u mahad-celinaysaa dhamaan hawl-wadeenadii Doorashadan Golaha Deegaanka ee ka hawl-galay goobaha codbixinta, muraaqibiintii xisbiyada ee goobaha, ciidanka amniga.
Waxa sidoo kale mahad gaara aan u celinaynaa Komishanka Doorashooyinka Degmooyinka dalka guud ahaan oo natiijooyinka degmooyinka kaga dhawaaqay Natiijada horu-dhaca ah ee degmooyinkii doorashadu ka qabsoontay iyaga oo raacaya xeerka doorashooyinka golaha deegaanka ee Xeer Lr 20/2011. Waxa iyana ammaan mudan dhamaan goobjoogayaashii caalmiga ah kuwaas oo ka marag kacay in doorashadu si wanaagsan u qabsoontay.
Dhinaca kale waxa aynu ogsoonahay dalkan curdinka ah marka loo barbardhigo caalamka ay jireen culays badan kana maqnaayeen qayb ka mid ah kaabayaasha laf-dhabarta u ah doorashooyinka oo ay ka mid yihiin.
1.	Iyada oo aanay jirin qofka muwaadinka ah wax lagu aqoonsado, iyada oo aanay jirin wax lagu garto deegaankisa iyo inuu gaadhay da’dii doorashada.
2.	Iyada oo aynu ogsoonahay in aanay jirin diiwaangelinta codbixiyayaasha (taas oo la laalay).
3.	Inaga oo ogsoon in la furay ururadii oo ay ku tartamayeen axsaabta badan.
4.	Inaga oo badalnay hanaankii doorashooyinka Golayaasha Deegaanka aynu hore ugu galnay ee ahaa in xisbiga la doorto, laguna badalay in murashaxa loo codeeyo.
Arrimaha kor ku xusan iiyo qaar kale oo jiray awgeed waxa ay ka dhigtay in doorashada aynu galay aad looga walaac qabay sida ay u dhacayso. Allaha weyn awoodiisa iyo xikmadiisana waxa doorashadu inoogu qabsoontay si aad uga wacan waxii laga filaayay.
Dhinaca kale waxa jiray in doorasho kasta oo caalamak laga qabto ay leedahay cid guulaysta iyo cid laga guulaysto. Waxa iyana laga wada dharagsan yahay in todobada xisbi/urur ee tartamayay ay hadhayeen 4 ka mid ah, halka 7 murashax oo kasta ay dhacayeen 6 murashax.
Waxa tani ka dhigaysaa tirada murashaxiinta aan guulaysanayn in kor u dhaaftay 2000 (laba kun oo murashax), halka ay soo baxayeen oo kaliya 350 murashax.
Cabashooyinka aynu ka filan karno tirada badan ee murashixiinta aan guulaysanayn waxa sharciga dalku u dejiyay hanaan lagu gudbiyo cabashooyinka sida uu dhigayo sharciga dalku iyo heshisyada ay kala saxeexdeen ururada iyo xisbiyadu (code of conduct). Waxaana waajib ah in qiimayn la siiyo Garsoorka Dalka oo ka garnaqa wixii khalad ah, natiijada ka soo baxda.
Garsoorka Dalkuna waa waajib qaran in lagu kalsoonaado laguna qanco, iyada oo ay mudan tahay in la qiimeeyo shacbi weynaha Somaliland.
Iyada oo dariiq xaasaasi ah oo doorasho laga soo baxay oo si wanaagsan inoogu dhamaaday, waxa inta ku lamaanaa eedaymo saxaafada qaar lagu qoray oo ay ka mid ahayd in Xog-doorasho luntay, in Guddida xubno ka mid ah ay is casileen, in Gudida madaxdeedu ay dagaalameen, in natiijada maxkamada loo diray dib loo soo celiyay, kuwaas oo dhamaantood ahaa been aad u fool xun oo lagula kacay si badheedh ah in lagu dhaawaco doorashooyinka, waxaana maanta shacbigu ogaaday in ahayd been iyo kicin iyo xumayn loola kasay doorashooyinka iyadoo shacabku aanu ka mutaysan. (Haddii mid faasiq ahi idiin la yimaado War (Warsheeko), iska Hubsada) Aayad Quraan ah
Haddii ay jiraan cabashooyin xaqiiq ku fadhiya waxa ka garnaqa Garsoorka Dalka. Waxa aanu jecelnahay in aanu idiin xasuusino in Natiijada Degmooyinka Lagaga Dhawaaqaa ay yihiin Natiijooyin Horu-dhac ah, Natiijaduna ay ansaxayso oo kaliya marka Maxkamada gobolku ansixiso. Maxkamadaha Gobolka ee dalkana waxa aanu aad ugu mahadcelinayaa xilkii ay iska saareen hubinta natiijooyinka iyo sida ay uga Go’aan ay ka gaadhayaanba.
Waxa aan halkan ka cadaynaynaa in doorashada marka ay dhacday in tabashooyin ay jireen ururada iyo xisbiyadu soo jeedinayeen ay ku koobnayd sanaaduuq kooban oo ka tirsan Degmoyinka dalka qarkood. Max iyana jiray cabashooyin ku saabsan sababta ay uga dhici weyday Degmooyin ka mid ah dalka.
Sida sharcigu dhigayo cabashada waa inay ka soo bilaabantaa Goobta codbixinta, sidoo kalana waxa dacwadaha lagu eegayaa Degmada oo ka go’aan gaadhaysa sida xeerka Doorashooyinku Golayaasha Deegaanku Dhigayo Xeer Lr 20/2011.
Geerigaabo: Waxa jirtay cabasho sanduuq ka mid ahaa Degmada Ceerigaabo, oo inta goob la geeyay la goaaday in aanay goobtiisii ahayn, lagana qaaday subaxnimadii hore ee 28 Nov 2012 oo ahayd maalinta Doorashadu dhacaysay, waxaana sanduuqaa lagala baxay waraaqihii lagu codaynay qayb ka mid ah. Waraaqihii codeynta ee ku hadhay waa lagu soo codeeyay waxaana isla qaatay Komishanka Degmada Ceerigaabo iyo wakiilada xisbiyada in la tiriyo maadaama warqaaha inta kale goobtiisa lagaga soo codeeyay. Warqada hada la tusay ee la sheegay in debada laga helay waa waraaqaha lagala baxsaday sanduuqaa Ceerigaabo ah.
Axmed Dhagax: Degmadan oo ka tirsan Caasimada Hargeysa, lana geliyay magaalada in xog ka luntay ma jiraan haba yaraatee wax xog ah oo ka luntay, waxa la hayaa dhamaan natiijadii ay saxeexeen wakiilada xisbiyada iyo ururada ee degmadan Hargeysa oo Axmed Dhax-na ka mid tahay. Waxa dhacay oo kaliya waa in Kombiyuutarkii lagu guray xogta uu furmi waayay. Taas oo lagu guray xogtii iyada oo laga tixraacayo warqadaha xisbiyada iyo ururadu saxeexeen iyada o ay goob-joog ka ahaayeen dhamaan wakiilada xisbiyada iyo ururada.
Faraweyne: Waxa kaliya Natiijada Komishanka Degmooyinka Dalku kaga dhawaaqeen dib u sax lagu sameeyay Faraweyne oo ka tirsan Degmada Hargeysa, taas oo marka uu soo gaadhay nuqul ka mid natiijada Degmada Hargysa ay ku dhawaaqday Guddida Doorashooyinka Qaranka arkay inay jiraan in goobaha Faraweyne goobuhu labanlaaban yihiin marka loo eego Natiijada ay isla saxeexeen wakiilada xisbiyada iyo hawl-wadeenada Komishanka Degmada Hargeysa, waxa iyada oo sax ah (Natiijadii ay isla saxeexeen Komishanka Degmada & wakiilada xisbiayda/ururada) Komishanka Degmada Hargeysa u gudbiyay Maxkamada Gobolka oo ku dhawaaqday Natiijada Degmada. Waxaana Gudida ku ahayd ceeb inay qariyaan khalad ay arkeen, run sheegidu waa xalka ugu dhaw ee lagu xaliyo arrin.
Waxa runtii iyana aan marnaba dhicin horana u dhicin inta waraaqo doorasho la qaado in doox lagu daadiyo waa arrin taariikhda doorasho ee Somaliland aan ka suurogelin codka sanduuq kasta ka soo hoydana waxa isla hubiya oo isla qaata wakiilada xisbiyada iyo ururada iyo hawl-wadeenada Komishanka Degmooyinka.
Degmooyinka aanay ka dhicin: waxa marag ma doon ah in Guddida Doorashooyinka Qaranka si laxaad leh uga hawlgaleen inay ka qabsoonto doorasho deegaamoyinka dalka oo dhan iyagoo wada tasho joogtana ahna la samaynaya daneeyayaasha doorashada. Goobaha aanay doorasho ka dhicin waa goobo ay xasilooni daro ay suurogalin wayday inay ka dhacaan sida aad ku maqasheen warbaahinta dalka iyo caalamkaba. Allaa Awood Leh .”
Previous PostGolaha Cusub ee Deegaanka Boorame Oo Doortay Maayar Iyo Ku-xigeenkiisaNext PostGudoomiyihii Hore ee Baanka Somaliland Oo Ku Geeriyooday Hargeysa	Blog